BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Sawirro xiiso leh
Sawirro xiiso leh
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Oktoobar, 2012, 19:15 GMT 22:15 SGA
Haweeney ka qaybgalaysa dibadbaxyo ku baaqaya iscasilaanadda madaxwaynaha Togo Faure Gnassingbe, oo horay eegaysa kadib markii booliisku suntan dadka ka ilmaysiisa adeegsadeen caasimadda, Lome, maalintii Jimcaha. Wajiga ayay marsatay budada jeesada si ay gaaska jirkeeda uga difaacdo Maalintii Khamiista, nin jooga magaalada Wanla-wayn eeSoomaaliya oo dhowaan ay ka maleeshiyada Islaamiga ah, wuxuu rinji dul-marinayaa qoraal lagu xusayay Saleh Ali Saleh Nabhan, oo ka mid ahaa hogaamiyayaasha al-Qaeda ee bariga Africa oo lagu dilay weerar circa ah oo Maraykanku ka fuliyay sanadkii 2009.
1)	Horaantii todobaadkan, Axad, Dagaalyahan Soomaali ah oo ka tirsan maleeshiyada taageerta dowladda ee Raas Kambooni oo timaha jarana magaalada koonfureed ee dekedda ah ee Kismaayo, magaalo kale oo dhowaan laga qabsaday kooxda al-Qaeda xiriirka la leh. Diyaaradaha Uganda oo dul duulaya dhoolatus military caasimadda Kampala, maalintii Tallaadada – sanadguuradii 50-aad ee xornimada dalka Uganda markii uu ka qaaday England. Maalin ka hor naxashka maydka madaxwaynihii hore ee Chadli Bendjedid oo la saaray baabuur military intii lagu jiray baroordiiq ka dhacaysay caasimadda Algiers.
Saraakiil ka tirsan markabka Libertad ee sita calanka Argentina, oo taaga dekedda Tema ee bariga caasimadda Ghana Khamiis. Maalintaas, xaakim dalka Ghana ah ayaa diiday in markabka uu dekedda ka dhaqaaqo, waxaa loo joojiyay kadib markii saraakil Argentine ah ay dalbadeen .
Isla Khamiistii, nin kalluumaysato ah Masri ah oo ku sugan dekedda Benghazi ee Libya, wuxuu isku diyaainayaa kalluumaysi badda Mediterranean.
Subaxaas Kalluumaysata ayaa isku diyaainaya in ay badda galaan dekedda kalluumaysiga Soumdedioune ee dalka Seneal. Todobaadka ayaa warbixinta aasaaska caddaaladda bii’ada ay sheegtay in galbeedka Africa uu leeyahay heerarka ugu sareeya kalluumaysiga sharci darada ah – iyadoo maraakiib burcad ah ay wixii ay soo qabtaan u dhoofiyaan Europe. Caasimadda Senegal's ee Dakar, Sabti, Nin iyo neefkiisa ayaa sugaya garsoorayaasha in uu ku dhawaaqo cidda ku guulaysata is reereebka gobolka ee tartanka idaha ee Khar Bii oo telefishinka laga sii daayo. Bandhigga ayaa ah mid la mid ah nooca Idol ee Maraykanka oo lagu raadiyo Idaha ugu wanaagsan wadankan galbeedka Africa.
Gaba rjooga Nigeria magaalada Lagos oo cabitaan fudud doonaysa in ay ka iibiso bas taagan maalintii Khamiista, waa maalintii ugu horaysay ee caalami ah oo Qaramada Midoobay ay qaabaysay ee gabdhaha yar yar. Waa maalin loogu talogalay in lagu aqoonsado xuquuqda gabdhaha, dhibaatooyinka horyaalla iyo takoorka ay wajahaan
Isla maalintaas, dhowr kun oo dad ah oo ku sugan caasimadda Mali ee Bamako, iyagoo dalbanaya faragalin military oo deg deg ah waqooyiga dalka gobolka Ecowas. Tabeelayaashooda ayaa cambaaraynaya xoogaga Islaamiyiinta ah ee qabsaday waqooyiga dalka Mali kadib afgambi military oo horaanta sanadkan ka dhacay dalkaas. Qof adimaha go’an oo 7 sano jir ah dalka Sudan-ta Koonfureed waxaa uu ku cayaarayaa kubadda tennis ah xarunta dib u dajinta ee magaalada Juba maalintii Arbacada. Waxaa lugtu ka go’day isagoo afar jir ah kadib markii miino uu ku cayaarayay ay ku qaraxdan, iyadoo dishay hooyadii. Isniintii dalka deriska ah Sudan,Haweenay ayaa isku diyaarinaysa duriin bariga Darfur oo olole tallaal uu ka socda oo ka dhan ah meningitis hoping to target 16.9 million children and adults across the country.
Ubax ka baxay duurka meel u dhow Darling oo ku taalla daafaha magaalada Cape Town ee Koonfur Africa- waxaa la sawiray Arbacadii. Kumanaan dalxiisayaal ah ayaa booqday gobolka xeebta galbeed sanad walba si ay u daawadaan ubaxyadan. 1)	: Maalinta xigtay, heesaaga M'bilia Bel, oo loo yaqaan boqoradda Congo rumba, ayaa heesaysa xilli ruwaayad ka dhigayso garoonka cayaaraha ee Shahiidiinta ee magaalada Kinshasa, caasimadda Jamhuuriyadda Demoqraadiga ah ee Congo, oo martigalinaysa shirka wadamada Francophonie – Waa kulan ay yeeshaan hogaamiyayaasha dalka ku hadla afka Faransiiska.